5 Siyaabood Oo Wanaagsan Oo Aad Ku Raali Gelin Karto Lamaantaada/Lamaankaaga | Aayaha
Dad badan ayaa raali geliya kuwa ay jecelyihiin haddii uu noqon lahaa nin ama naag intaba balse qaar kamid ah raali gelintaas ayaa ah mid ay daacadnimo la socto.
Qaabkee u bixisaa raali gelin dhab ah.
Ugu horeyn, waa in lamaantaada aad u sheegtaa in waxaad sameysay ay qalad ahaayeen. Waa tallaabada ugu horeysa ee aad si daacad ah oo dhab ah ugu raali galineyso isla markaana ku qiraneyso dambigaaga.
Tallabada xigta aad si dhab ah ugu raali gelin karto waa inaad garataa saameynta qaladkaa ku kacday uu ku yeeshay lamaankaada/lamaantaada. Isku day inaad fahamto saameynta qaladkaa sameeysay una damqo lamaankaaga/lamaantaada.
Raali gelinta ka saar ereyga “Laakiin”
Markaad tiraahdo “waanka xumahay” isku day inaadan soo qaadin ficillada qaladkaa ku kacday waxa sababay, markaad raali geliso oo aad ku darto laakiin, waxay baabi’ineysaa raali gelinta.
Mid kamid ah qaababka ugu waaweyn ee aad ku raali gelin karto waa inaad qaadataa masuuliyadda ficilladaada iyo qaladkaad ku kacday. Ha isku dayin inaad cid kale dusha ka saarto.
Raali gelinta dhabta ah waxay u baahantahay masuuliyad buuxda.
Tallabo qaad, tusi sida aad uga xuntahay ficillada oo hadal kaliya yeysan kaa noqon.ficilka waa tallabada ugu dambeysa ee raali gelinta dhabta ah. Waxaa intaas kasii muhiimsan, in qaladkaad gashay uu cashar kuu noqdo oo aadan mar kale sameynin.
Raalli gelinta dhabta ah way ka baxsantahay “waanka xumahay”; haddii tallaabooyinkaan ay Meesha ka maqanyihiin dabadeed raali gelinta maahan raali gelin daacad ah oo dhab ah.
Lamaankaaga Lamaantaada Raali gelin